उत्प्रेरणा र उत्साहको नयाँ वर्ष २०७५ – .:: Alpabiram
Foto Slider | विशेष |
नयाँ वर्ष पहिलो पटक आउने होइन वा एक पटक आएर पनि सदाका लागि रहि रहने होइन । जसै जसै परिवर्तन हुन्छन् मास र ऋतु परिवत
र्न, आगमन हुन्छ एक अर्को नयाँ वर्षको । संकेत वसन्तमा पलाउने नयाँ पालुवाले दिन्छ, कोइलीको भाकाले दिन्छ अनि दिन्छ सुस्त सुस्त सुसाइरहेको नदीको गतिमा अविरल बहने छालले जब यसको वेगले गति प्रवाह गर्छ । तर प्रकृतिको रँगमा रँगिने समयचक्रसँगै मानवका रँगमा पनि त्यस्तो बदलाव आउँछ र ? हो मानिसले पनि एक वर्षको उमेर नाघ्छ । एक वर्षका ६ वटै ऋतु पार गर्छ । वर्षको वर्षात्ले ल्याउने बाढी पहिरो या सकरात्मक रुपमा सोच्योँ भने वर्षात्ले ल्याउने सफापनको अनुभवको प्रतक्ष्यदर्शी हो मानव । शिशिरको आगमनसँगै फेरि प्रकृतिले एक नयाँ रुप लिन्छ । पतझरको एक फरक रुप देखापर्छ । यो अर्को अनुभव । यसरी प्रकृतिले वर्षका वाह्रै मासको परिवर्तनलाई स्वयम भागी बनेरै अनुभव गर्छ । तर के मानवले पनि यस्तो अनुभव गर्छ त एक वर्षको समयमा ?
मानवीय जीवन सामान्य रुपमा चलाएमान भइ रहँदा अचानक एक यस्तो क्षण पनि आउँछ जब सामान्य असामान्य भइ दिन्छ । दिनोचर्यामै केही बदलाव ल्याइदिन्छ । केही फरकपन चाहे दुःखको होस्, चाहे सुखको । तर यो ऋतुसँगै मिल्यो नि भन्न मिल्दैन यो अपरझट आउने क्रिया हो जसको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन जस्तो की प्रकृतिमा आउने बाढी प्रकोप लगाएतका विनाषहरु या भनौँ वर्षायाममै हिँउ पर्नु जस्ले छुट्टै तररोमाञ्चाकारी अनुभव गराउँछ सायद यो एउटा सुखको पल हो । तर यतिमा मात्रै अड्किएर यो भन्न सकिने वातावरण छैनकी मानिसले वर्षका सबै ऋतुको अनुभव गर्छ आफैले ।
जसरी ऋतुमा बदलाव आउँछ । जस्तो नयाँ अनुभव ल्याउँछ । मानिसको जीवनमा पनि यस्तै नयाँ अनुभव आउनु पर्ने जबकी ऊ पनि यही प्रकृतिकै एक अँग हो । तर किन हतार जस्तो केही उजाड निरस जस्तो सप्तरँगी होइन एकरँगी पनि बल्लबल्ल प्राप्त गरेजस्तो । इच्छा भन्दा आकाँक्ष्या बढी । कार्य भन्दा लोभ बढी । सन्तुष्टिभन्दा क्रोध बढी । आखिर त्यही प्रकृतिकै अटुट अँग मानव । यी भाव र कर्मबाट माथि उठ्न सके निःसन्देह मानिसले एक बिल्कुलै रोमाञ्चाकारी जीवनको अनुभव गर्न सक्छ । जीवन र जगत्लाई बुझ्ने चेष्टा राख्न सके त्यो भन्दा आनन्द अरु के ? यही आनन्द र उत्साहकै प्रतिक बनोस् नयाँ वर्ष २०७५ ।
:: सम्बन्धित शीर्षकहरु | Foto Slider विशेष बाट
नयाँ वर्ष २०७५ काे सुर्यागमन
यत्रो काउली के गर्ने होला ?